Tena mila izany anefa izy ireo tompon’andraikitra any an-toerana hahafahana mitatitra haingana ny valin’ny fitiliana hatao amin’ireo ahiahiana ho mitondra ny tsimok’aretina eny anivon’ny Institut Pasteur. Anisan’ny mampihisatra ny asa fitsaboana hatao any an-toerana mantsy izany raha araka ny loharanom-baovao azo. Ankoatra izay dia tsy manana aron-tava hisoloana matetika koa ny mpitsabo raha olana ny resaka respirateur hamonjena ireo marary tena sempotra. Tsy manana ilay fitaovana fitsapana hafanana ihany koa ireo tompon’andraikitra manao ny sakana any amin’iny lalam-pirenena faharoa iny hahafahana mamaritra ny hafanan’ny olona iray. Miantso ny hijeren’ny Fitondram-panjakana izany rehetra izany araka izany ireo tompon’andraikitra any an-toerana hahafahana mifehy haingana ity areti-mandoza ity. Tsiahivina moa fa Fokontany 20 ao Toamasina no ahitana ny tsimok’aretina COVID 19 ankehitriny.